Fra Modestino: come diventare oggi figli spirituali di Padre Pio | Ilblogdellapreghiera
Nwanna Modestino: otu esi esi bụrụ ụmụ ime mmụọ nke Padre Pio taa
UZ O ISI Gbanye nna nke PIO EGO
SI AKW :KWỌ AKW :KWỌ: M ... ỌR OF NKE FATHES OF FRA MODESTINO DA PIETRELCINA
AKW .KWỌ AKWOKWỌ AKOKỌ
Comingghọ nwa Padre Pio nke ime mmụọ abụwo nrọ nke mkpụrụ obi ọ bụla na-atụ egwu Chineke nke bịakwutere Nna na ọnọdụ ime mmụọ ya.
Kwesịrị inweta aha ọjọọ a bụ ebumnuche onye ọ bụla kemgbe Padre Pio, tupu ịnakwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị ime mmụọ, chọrọ ịchọta ezi ngbanwe nke ndụ na mmalite nke njem ndụ, nke enyemaka ya na nchebe ya na-emetụta. . Na 1956 abụrụ m otu ebe obibi ndị obibi Capuchin na Agnone, bụ obodo mara mma na Molise, tụgharịrị uche n'uru ọma ndị Nna m nabatara dika ụmụ ime mmụọ ya nwere ike inweta. Mgbe ahụ, echere m na m na-akwa ụta maka ndị niile na-enweghị ike ịga San Giovanni Rotondo jụọ Padre Pio maka nkuchi nke mmụọ na ndị, ọbụlagodi nke ọma, onye ga-abịakwute Nna mgbe o mechara njem n'ụwa. N’eziokwu, ọ ga-amasị m ka mmadụ niile nwee ike ịnya isi, ọbụlagodi n’ọdịnihu, ịbụ “ụmụ ime mmụọ nke Padre Pio”.
A tinyekwara agụụ a na ihe ọzọ m nwara ị nweta ebe ọ bụ na aka ọrụ okpukpe jichiri m: "gbasaara Nwanyị anyị nzi ofufe site na ntinye nke ụbọchị nsọ."
N'afọ ahụ, site na ọchịchọ abụọ a n'obi m, abịara m ezumike gaa San Giovanni Rotondo iji nọrọ ụbọchị ole na ole nso Nna m.
Mgbe m kwupụtara ya, na oriri nsọ, enwere m ihe mmụọ nsọ, mgbe e boro m ebubo mmehie, ajụrụ m ya: "Nna, ọ ga-amasị m zụọ ụmụ ime mmụọ ya na Agnone".
Ka ọ na-ekwupụta njikọ nke ọchịchọ m ya na ịdị ụtọ nke anya ya buru ibu ma na-enwu gbaa, Padre Pio jiri obi ọmịiko zaa ya: "Gịnị ka ihe ịchọrọ n'aka m gụnyere?"
N'inye agbamume ahụ agbamume, agbakwunyere m: «Nna, ọ ga-amasị m ịmalite, dị ka ụmụ ime mmụọ gị, ndị niile ga-eme ntụgharị nke rosary ụbọchị ọ bụla na ime Mass dị nsọ site n'oge ruo n'oge dị ka ebumnuche gị si dị. Enwere m ike ịme ya ma ọ bụ na ọ gaghị eme? ». Padre Pio, gbasaa ogwe aka ya, welie anya ya n’elu igwe kwupụta, sị: «Ma mụ, Fra Modestino, enwere m ike jupụ nnukwu uru a? Mee ihe I gwara m, aga m enyere gi aka ». Laa azụ na Agnone ejiri m ịnụ ọkụ n’obi malite ozi m ọhụrụ. Rosary dị nsọ na-agbasa ma ezinụlọ ime mmụọ nke Padre Pio na-eto ugbu a site n'aka ogbenye m. N'oge ọzọ, m gakwuuru Nna m ka m na-ekpe onye ụkọchukwu ụka ekpere ma jụọ ya, "Nna, gịnị ka m ga-agwa ụmụ ime mmụọ ya?"
Ọ zaghachikwara na olu gosipụtara ihunanya dị ukwuu: "Gosie na m na-enye ha obi m niile, ọ bụrụhaala na ha nọgidesiri ike na-ekpe ekpere ma dịkwa mma."
Ọzọkwa, ka m so ndị na-ekwe ukwe soro ya gaa n’ụlọ ụkọ ahụ, ajụrụ m ya: “Nna, ọnụ ọgụgụ ụmụ gị ndị nwoke ime mmụọ dị ukwuu ugbu a!” Kedu ihe m ga - eme, kwụsị ma ọ bụ nabata ndị ọzọ? ».
Padre Pio wee meghee aka ya, na mkpu nke mere ka obi m maa jijiji, zara, sị: "Nwa m, mụbaa etu ị nwere ike n'ihi na ha baara ha uru n'ihu Chineke karịa mụ onwe m".
N'ụbọchị nzukọ mụ na Nna m na-agụta ọnụ, m ga-asị na m na-arịọ mgbe ụfọdụ ụfọdụ n'echeta ya dị ka onyinye. Agbanyeghị, ọchịchọ m emezubeghị.
N’ụbọchị mbụ nke ọnwa: na Septemba 1968, anọ m na Isernia mgbe Nna nyefere otu n’ime ụmụnne m ọrụ a: «Gwa Fra Modestino na ọ ga-abịa San Giovanni Rotondo, m ga-enye ya ihe mara mma».
Mgbe onwa Septemba 20, nzukọ ọgbakọ nke ụwa niile na San Giovanni Rotondo, m gbakwuru ya.
Mgbe o mechara ememme a, Padre Pio so mee ya. Nna Onorato Marcucci na Nna Tarcisio da Cervinara nọ ya. Amakụrụ m ya ogologo oge. O metụrụ ya n’obi nke ukwuu. Otutu obi nwere mmetụta n’ụbọchị ahụ. O siri ike ikwu okwu. Ugbu a, o tiwere nwayọ. Na mberede, ọ na-efegharị ka m bịarukwuo nso. M gburu ikpere na nso. O jiri nwayọ wepu okpueze na apụl ahụ na - enweghị atụ ma tinye ya n'aka ya, meghee onyinye ahụ, na - ele anya dị ka ọ ga-agwa m: «Lee, enyefe m gị chapleti dị nsọ. Kwaa ya, gbasaa n’etiti umu m.
Ọ bụ nkwado ikpeazụ nke ikike, ọrụ dị ebube.
Taa, mgbe ọ nwụrụ, a na-agụta ụmụ ime mmụọ Padre Pio karịa. Ezinaụlọ a na - ezukọ, dịka o kwesịrị, na mmụọ, kwa mgbede na elekere asatọ nke 20,30:XNUMX, gburugburu ili Nna.
N'ebe a ka m nọ, Fra Modestino, na-edughachi ọgụgụ nke chaplet. Ndị ahụ niile, ga-esi n’ụlọ ha, sonye na ncheta nke Nna ahụ masịrị, site na 20,30 ruo 21,00, ma ugbu a ha ga-eme emume dị nsọ dịka ebumnuche Padre Pio, ga-abụ ụmụ ime mmụọ ya.
A na m ekwe gị nkwa n’okpuru ọrụ nke m. Ha ga-erite uru site na enyemaka na-aga n'ihu nke Nna na oke ekpere m n’ili gị.
Kedu okpu okpueze dị iche iche jikọtara ọnụ na mgbede gburugburu ili ebube Padre Pio!
Ugboro ole ka o di elu, nne nke elu-igwe, o na aara umu nke Padre Pio, bu ndi n’otu n’otu na ekpe ekpere n’akuku nile nke uwa!
Ndị na-etinye onwe ha n'ịghota okpueze a gọziri agọzi ga-agharịrị ịjụ mmehie wee soro ihe atụ Padre Pio. Site na nke a a ga-amata ụmụ nke mmụọ Nna: a ga-eme ka ha dịrị n'otu site na njikọ nke siliki dị ụtọ nke jikọtara anyị na Chineke, ha ga-ahụ n'anya, kpee ekpere ma taa ahụhụ dịka Padre Pio hụrụ n'anya, kpee ekpere ma taa ahụhụ, maka ọdịmma nke mkpụrụ obi ha na maka nzọpụta nke ndị mmehie. .
Ọtụtụ oku nke amara anatala, nke m na-anata, na-agba akaebe na Padre Pio, na-emezu nkwa ya, na-echebe ụmụ ime mmụọ ya n'ụzọ pụrụ iche, bụ onye, ​​na mgbe iri atọ na mgbede, anaghị agba agba na Holy Holy, site na Ntughari chapleti ya.
← Na post gara aga Gara aga post:Kwa ụbọchị na Padre Pio: 365 echiche nke Saint si Pietrelcina
Ọzọ Post → Post ozo:Kadinal Vatican: Pope Francis nwere 'ụjọ' gbasara Churchka na Germany